Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || डेंगे कीटको ‘हाउगुजी’ अनावश्यक:विज्ञ भन्छन्–‘कीट आवश्यकै छैन’ – kayakairan.com
डेंगे कीटको ‘हाउगुजी’ अनावश्यक:विज्ञ भन्छन्–‘कीट आवश्यकै छैन’
भरतपुर, ३० भदौ
डेंगे परीक्षणमा मनपरि शुल्क लिइएको खबर आइरहँदा विज्ञहरुले भने कीट अत्यावश्यक नरहेको दावी गरेका छन् । चितवनका अस्पताल तथा प्रयोगशालामा डेंगेको परीक्षण गर्नेको भिड लाग्ने गरेको छ । ज्वरोका अधिकांश बिरामीले हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर डेंगे परीक्षण गर्दै आएका छन् । तर, विज्ञहरुले भने डेंगेको खास उपचार र औषधि नभएका कारण लक्षणका उपचार गराउन सम्भव रहेको बताएका छन् ।
चितवनमा गरिएको परीक्षण र नतिजालाई केलाउँदा पनि डेंगे कीटको प्रभावकारिता करिब ३० प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ । देशभरको अवस्था हेर्दा यसको प्रभावकारिता १० प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । यहाँ भदौमा करिब ७ हजार परीक्षण गरिएकोमा करिब २ हजार एक सय जनामा मात्रै पोजिटिभ देखिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले उचित सल्लाह दिन नसक्दा सामान्य बिरामीले पनि डराएर डेंगे परीक्षण गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
सोमबार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का सरुवा रोग हेर्ने वैज्ञानिक डा.लुन्जतेन जेट वाङजुकले डेंगेको प्रभाव विश्वभर रहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सामान्य तरिकाबाट बुझाउन सक्नुपर्ने बताइन् । ठूलो रोगका रुपमा व्याख्या गरेर समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा लामखुट्टेको लार्भा नष्ट अभियानमा नागरिकको तहबाटै जागरुक हुनु आवश्यक रहेको बताइन् । “डेंगेको संक्रमण नपुगेको देश नै छैन । सबैतिर विस्तारै सामान्य बन्दै गइरहेको छ”, उनले भनिन्, “यसलाई सबै मिलेर कम गर्दै लैजान सकिन्छ । आफ्नो घर वरपरको ध्यान राम्रोसँग दिने हो भने समस्या कम हुँदै जान्छ ।” उनले परीक्षणको नाममा धेरै खर्च गर्नु पनि आवश्यक नरहेको बताइन् ।
स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले डेंगे देखिन थालेलगत्तै सुरु भएको नकारात्मक चर्चाबाट उत्पन्न त्रास हटाउन निकै गाह्रो भइरहेको बताइन् । उचित सल्लाह दिन नसक्दा बिरामीहरु ठगिनुपरेको भन्दै उनले यस विषयमा सजग रहन आग्रह गरिन् । उनले कीटलाई मात्र मुख्य कुरा नसम्झन आग्रह गरिन् । उपचार र नियन्त्रणलाईसँगै लैजान मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कीटसम्बन्धी हेर्ने शाखाका प्रमुख डा. प्रकाशप्रसाद शाहले डेंगे परीक्षण कीटको विषयमा अनावश्यक ‘हाउगुजी’ गरिएको टिप्पणी गरे । चितवनमा स्वास्थ्य कार्यालय भरतपुर महानगरपालिकाले पत्रचारै गरेर दुई÷दुई हजार थान कीट माग गरेको भन्दै उनले यो आवश्यक नै नरहेको बताए । स्वास्थ्यकर्मीहरुले बुझाउन नसकेकै कारण जनताको तहबाट कीटको माग अत्याधिक भइरहेको उनले बताए । देशभरमा गरिएको परीक्षणमा करिब १० हजार जनामा डेंगेको संक्रमण भेटिएको शाहले बताए । “सरकारी अस्पतालहरुले मागेको जति कीट उपलब्ध गराएको भए एक लाख कीटले पनि नपुग्ने स्थिति थियो”, उनले भने, “तर हामीले पठाएनौं । यो अनावश्यक खर्च हो ।”
चितवन मेडिकल कलेजका फिजिसियन डा. सितल केसीले कीटको पछि लाग्दा बिरामीको व्यवस्थापनमा समस्या नहोस् भन्ने विषयमा सजग रहनुपर्ने बताए । “कीट नहुँदा उपचार नै हुँदैन कि भन्ने भ्रम छ”, डा. केसीले भने, “यस्ता कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ ।” चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले पनि कीट विनाउपचार नै हुँदैन कि भन्ने भ्रम जनतामा परेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । चितवनमा डेंगेको सही तथ्यांक आउनै नसकेको भन्दै साप्ताहिक तथ्यांकलाई तुलना गरेर अवस्थाबारे विश्लेषण गरिनुपर्ने बताए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कीट नियन्त्रक राम केसीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केन्द्रबाट प्राप्त १ हजार ५ सय ८५ थान कीट सरकारी अस्पताललाई उपलब्ध गराइएको छ । त्यसबाहेक भरतपुर अस्पताललाई भरतपुर महानगरपालिका कार्यालयले १ हजार थान कीट उपलब्ध गराएको थियो । निजी क्षेत्रले समेत ५ सय थान कीट उपलब्ध गरायो । करिब तीन हजार कीटमार्फत परीक्षण गर्दा भरतपुर अस्पतालमा ४ सय ६४ जनामा मात्रै डेंगेको संक्रमण भेटिएको छ ।तर पनि सर्वसाधारणमा बढेको ‘डेंगे हाउगुजी’का कारण अस्पताल कीटमार्फत नै परीक्षण गर्नुपर्ने दबाबमा छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपकप्रसाद तिवारी र महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख दीपक सुवेदीले आगामी दिनमा चेतनामूलक अभियानमा थप सक्रिय बन्ने बताए । जनशक्ति अभावका कारण काममा असर परिरहेको भन्दै स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तिवारीले स्वास्थ्य सचिव सामु गुनासो गरे ।
फगिङबारे भ्रम धेरै
यसअघि आइतबार प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालले पत्रकारहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि ‘फगिङ’को आवश्यकता नरहेको बताएका थिए । लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा मेसिनको माध्यमबाट औषधी छर्ने(फगिङ)गर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने उनीहरुले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख कीट नियन्त्रक डा. बीएन नाग्पालले फगिङको प्रभावकारिता समयक्रमसँगै घटेको बताए । “बिगतमा अन्य उपायहरु नै छैन जस्तो पनि थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन”, उनले भने, “हामीले जतिसक्दो कम क्षतीबाट रोग नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चौधरीले पनि फगिङ गर्दा खर्च अत्यधिक हुने तर प्रभाव कम हुने बताइन् । “हामीलाई यसबारे स्पष्ट छ । तर, जनताको तहबाट निकै ठूलो दबाब आउने गरेको छ”, उनले भनिन्, “हामी फगिङको पक्षमा छैनौं ।” उनले लामखुट्टेको लार्भा र बासस्थान नष्ट गर्न मन्त्रालयले अन्य उपायहरुमा ध्यान दिइरहेको बताइन् । उनले यसबारे देखिएको भ्रम हटाउन स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आग्रह गरिन् ।
बिरामीको ज्यान गएपछि आफन्त आन्दोलित
सुजीत चम्किँदा जावलाखेल क्वाटरफाइनलमा
बलराम अग्रवालका दुई लघुकथा र तिनका पात्रहरू
म्याजिक गाडी माथि ट्राफिक प्रहरीको कडा निगरानी, क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउनेलाई कारबाही
अस्पताल क्षेत्रमा नियमित सरसफाइ